Waze dia havaozina amin'ny Waze Places amin'ny andiany 3.9 | Androidsis
Waze no tambajotra sosialy ho an'ireo mpamily izay misy tanjona mahaliana maro manasongadina ny fampahalalana amin'ny fotoana tena izy fa ireo mpampiasa ireo ihany Izy ireo dia voafaritra arakaraka ny toe-javatra misy amin'ny fifamoivoizana.
Izany dia iray amin'ireo hatsarany lehibe ary nahatratra fa misy fiatraikany lehibe amin'ny mpampiasa eto amin'ny firenentsika, ankoatry ny fananana andiam-pandeha hafa izay mahatonga azy io iray amin'ireo fampiharana fitetezana tsara indrindra any. Mba hanatsarana kokoa ny fampiharana dia navotsotra ny kinova 3.9 vaovao miaraka amin'ny Waze Places, izay hahafahan'ny mpampiasa mitatitra toerana mahaliana miaraka amin'ny fampahalalana marina.
Indraindray dia isaky ny mandray ny fiara aho dia tsy mandeha amin'ny Waze mba hanampy ahy hivezivezy, manana teboka vitsivitsy ary hitondra ahy mivantana any amin'izay toerana haleha, manondro tsara ny ora hahatongavana ary ny làlana tsara indrindra hahatongavana any, na dia ny fisorohana ny fitohanan'ny fifamoivoizana aza.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Waze 3.9
2 Inona ny Waze?
2.1 Asongadin'i Waze
Inona no vaovao ao amin'ny Waze 3.9
Waze kinova 3.9 dia mamela ny mpampiasa ampio toerana amin'ny sari-tany ny adiresy an-trano na orinasa toy ny manampy fampahalalana fanampiny toy ny fijanonana na serivisy fiara.
ny toerana fijanonana mandeha ho azy ka na i Waze dia afaka mianatra hoe aiza no misy toerana hipetrahana sy haharitra hafiriana no hanaovana izany.
Zava-baovao iray hafa ny mety hisian'ny manampy sary miaraka amina karazana toe-javatra, satria mety ho fampahalalana marina momba ny fidirana amin'ny orinasa hafa. Ny zavatra atolotray an'ity zava-baovao ity dia hamadika ho teboka ho an'ny kinova fialamboly an'ny Waze miaraka amin'ny latabatra isa.
Ary farany, ny karohy autocomplete nampiana ho an'ny rehetra ihany tamin'ny farany.
Inona ny Waze?
Waze no fampiharana fitetezana ho tambajotra sosialy ho an'ny mpamily izay manana fiasa mahaliana maromaro ary mety hanjary ilaina amin'ny olona iray izay mampiasa ny fiarany isan'andro hifindra na ao an-tanànany manokana na manerana ny firenena.
Ny karazana isan-karazany ny fampahalalana momba ny lalana sy ny fifamoivoizana dia hangonina ara-potoana amin'ireo mpamily ireo ihany, mitsitsy amin'io lafiny io, fotoana, solika ary vola amin'ny diany atao isan'andro. Izy io koa dia manangona angon-drakitra momba ny lozam-pifamoivoizana, ny radara na ny loza ateraky ny arabe toy ny fitadiavana tobin-tsolika mora indrindra na fampahalalana tena ilaina amin'ny mpamily.
Ny iray hafa mampiavaka azy dia ny filalaovany izay hanoratra ireo kilometatra nodianao io ny manampy teboka ary afaka misafidy laharam-pahamehana hafa izay hamela amin'ny fotoana rehetra hanova ny sari-tany. Amin'ny fotoana hifandraisanao amin'i Waze dia ho hitanao eo amin'ny sarintany ny "fiara virtoaly" anao sy ireo hafa manodidina izay tena tambajotra sosialy misy ireo mpamily.
Fampahalalana momba ny lalana sy ny fifamoivoizana Amin'ny fotoana katroka novokarin'ny mpampiasa
fanairana notontosain'ny fiarahamonina anisan'izany ny lozam-pifamoivoizana, loza, radara, fanidiana ny lalana ary maro hafa
Havaozina tsy tapaka ny sari-tany avy amin'ny vondrom-piarahamonin'ny tonian-dahatsoratr'i Waze manokana
vaovao farany lalana mandeha ho azy
Mianara avy amin'ny toeran-kaleha matetika, fotoana fitsangatsanganana ary zotra tianao
La tobin-tsolika mora vidy kokoa
Hoy koa i fifandraisana sy namana ho an'i Waze
Fikarohana tokana mankany Hetsika Facebook ary Kalandrie
Mahazo isa hampiakatra ny satan'ny fiarahamonina
Mizarà ny toerana misy anao ary ny ora hahatongavana ho azy
Waze - GPS, Sarintany, Fanairana momba ny fifamoivoizana ary ny fitetezana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Waze dia nanampy tamin'ny andiany 3.9 an'i Waze Places, fanampiana amin'ny fijanonana ary maro hafa
Ahoana ny fampiasana Android Device Manager, Android Device Manager